Onye oru ugbo 1 na-eme ka ihe ịma aka nke oge a diri ndi oru ugbo ala Naijiria
Onye oru ugbo 1 na eme ka ihe ịma aka nke oge di nta nke ndi oru ugbo na Naijiria di mfe
Zute 3 Nigerian Startups pitching na Founders Showcase 2021 [Onye guzobere Institute]
ANSICTA ga-eme nzukọ ndị na-ahụ maka Innovation Anambra (AISS 2021)
Clubhouse tụpụrụ Beta Phase, na-agbakwunye ndị ọrụ gam akporo na Network ya
Youverify na-ebupụta YouID iji mee ihe Ngwọta Digital Identity 'All-in-One'
Ndị otu Ecobank Group na ndị Microsoft na ndị ọzọ na-akwalite ndị SME maka Digital Digital Economy nke Africa
Bank of Tanzania kwadoro Cellulant dị ka onye na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ
Creatmepụta Okwu Bara Uru Maka Ndị Ọrụ ga-enyere 'Wzọ Ọhụrụ nke Ọrụ' - Akụkọ Pan-African
USAID kwuputara $ 30 Million maka Researchlọ Ọrụ Nyocha na Innovation na Africa na Central America
Ndị dike azụmaahịa Africa kwupụtara Top 50 ndị ikpeazụ
Health Tech Startup 54gene eweputara ntụkwasị obi iji bulie ikike Africa na nyocha sayensị
AfriLabs na-agbasawanye Network, na bọọdụ 24 Innovation Hubs
Ulo oru ugbo na East Africa? Tinye maka onyinye Aceli Africa
N’ịgbaso ụkpụrụ nke mba ụwa, a na-aha ala iberibe ala nke na-erughị hekta iri dịka obere ugbo.
A akwụkwọ kpughere na ihe karịrị 80% nke ndị ọrụ ugbo Naijiria bụ ndị obere na ọrụ ugbo na-anọchi anya dị ka onye na-enye aka na Gross Domestic Product (GDP) na ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ dị mkpa na onyinye a.
Ndi oru ugbo a bu ndi isi na emeputa nri ndi Naijiria. Gọọmenti na ndị otu nzuzo etinyela mgbalị iji meziwanye ọrụ ugbo site na iwalite obere ndị ọrụ ugbo nke mba ahụ, nke ahụ ewepụtaghị nnukwu mbọ.
Ihe ngwọta ga-ekwe omume bụ ịgbanwee anya site na mgbanwe mgbanwe buru ibu gaa na obere njigide, ụzọ nke na-abụghị ihe ọhụụ na omume ọdịnala Nigeria.
Na-ele anya na ngwọta a mmalite mmalite agtech, Onye ọrụ ubi 1st otu ikpo okwu na ebumnuche iji nye azịza dị mfe maka ịnweta ahịa, nsogbu ụlọ akụ na obere ịgbazinye ego nke ndị ọrụ ugbo pere mpe na-eche ihu na Nigeria.
Na 2017, ikpo okwu bidoro dị ka TradexPress ọrụ ahịa agro na mkpokọta nke na-enye ndị ọrụ ugbo ohere ịnweta ndị na-apụ apụ (nnukwu ndị na-azụ ahịa na ndị na-arụ ọrụ agro).
Gyena jeremiah iliya, ceo, onye oru ugbo1st
Na Machị 2018, ụlọ ọrụ ahụ hazigharịrị ma debanye aha ya dịka Farmer First Technologies Agro Limited. Ọnọdụ a gbasaa ruo steeti asatọ bụ, Lagos, Taraba, Bauchi, Anambra, Kaduna, Enugu, Rivers na Abuja (FCT).
Ibido agtech meputara usoro nchikota nke ntaneti nke ahia ya wee bido nye ndi ulo oru agro ihe dika Kaptain Foods.
Na 2019, ụlọ ọrụ ahụ ghọtara na ndị na-ewepụ ya nwere nnukwu njem na nsogbu nsogbu mgbe ha jikọtara iwu ha.
Ya mere, ebe a kpebiri ịgbatị ọrụ ya iji gụnye ngwongwo agro ma bịanye aka na nkwekọrịta mmekọrịta mba abụọ na Fadama Co-operative Society na All-Farmers Association of Nigeria.
Na 2020, Farmer1st gbasaa ọrụ ya karịa ndị ọrụ ugbo 27,000 edebanyere aha na-achọpụta na ịnweta isi obodo na isi ụlọ akụ na ọrụ ego bụ nnukwu ihe ịma aka nye ndị ọrụ ugbo ime obodo.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ngwaahịa abụọ:
Onyinye ego di mkpirikpi maka ndi oru ugbo na ndi nwanyi ndi agro.
Bankinglọ akụ na-ahụ maka ekwentị (USSD) na ụlọ akụ na-elekọta ụlọ akụ na mmekorita ya na etranzact na Zenith Bank Plc, na-enyere ndị ọrụ ugbo aka ịkwụ ụgwọ, nata ego ma kwụọ ụgwọ ndị bụ isi.
Isi nchịkọta obere ọrụ ugbo na Nigeria
Dabere na Farmer1st karịa 70% nke ndị ọrụ ugbo na Nigeria bụ ndị ọrụ ugbo pere mpe, ya bụ, ha na-akọ ugbo na ala 1 to 9,5 hectare.
Onye ọrụ ugbo dị obere na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịzụlite akụ na ụba na Nigeria, na-enye onyinye dị mkpa ma dị mkpa na ngwaahịa mba.
Ọ bụ ndị ọrụ ugbo pere mpe na-emepụta 78% nke nri a na-eri na Nigeria.
Mworina zongo chieff operating officer (coo), onye ọrụ ugbo1st
Obere onye oru ugbo ala Nigeria nwere nsogbu nke izuta ihe ntinye dika ogwu, ogwu, fatịlaịza na akụrụ ngwa ọrụ ugbo.
Gọọmentị anaghị akwado ego nke ihe a ka ndị ọrụ ugbo a wee zụta ha.
Obere ndi oru ugbo enweghi ohere igbazinye ego, ndi oru ugbo a pere aka na emeputa nkpuru osisi di ala n'ihi na ha enweghi ego iji bulie oru ugbo.
Enweghị ala Tenure sistemụ, obere ndị ọrụ ugbo na oge ụfọdụ enweghị ohere ịkọ ugbo. Ndị ọrụ ugbo pere mpe enwechaghị ike na teknụzụ ugbo ọgbara ọhụrụ.
Enweghị na ụgwọ dị elu nke ọrụ na ime obodo. Obere ndi oru ugbo enweghi ozi banyere mmepe na nso nso a na mpaghara ugbo
1 Farmer Solution
Farmer1st na-enye ndị ọrụ ugbo nwere ndị na-apụ apụ, na-enyere ha aka belata nchekwa na-adịghị mma, na-ekpughere ọchịchọ nrigbu nke ọtụtụ ndị etiti na ubi na-amịpụta emebi n'ihi enweghị ndị na-apụ apụ.
Edepụtara Farmer1st ugbu a na ahịa ngwaahịa Lagos (LCFE) na Afex Commodities gbanwere iji gbanwere ngwa ahịa ugbo.
Micro Ebe E Si Nweta
Farmer1st chọpụtara na ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na Naịjirịa anaghị enwe ego ịgbazinye ego. mgbazinye ego na ngalaba ọrụ ugbo maka obere ego 3.6% nke mkpokọta ego mgbazinye ego nyere site na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ.
Imirikiti obere ego a na-achọkarị mgbazinye ego ndị a iji nweta ihe ntinye ugbo, ya mere, usoro Agro Money, atụmatụ obere ịgbazinye ego na-enyere ndị ọrụ ugbo ọkachasị ụmụ nwanyị nọ n'ọrụ ugbo ohere mgbazinye oge dị mkpirikpi na ọmụrụ nwa otu-ọnụọgụ.
Ihe karịrị nde obere ndị ọrụ ugbo 30 na Nigeria anaghị enweta ego na ọrụ ego.
Iji maa atụ, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nọ n’ime obodo na Plateau steeti enweghị ụlọ akụ, ebe ọtụtụ ndị ọrụ ugbo a enweghị ego.
Sakmichit miner, onye isi ahia (cmo), onye oru ugbo1st
Emepụtara Ọrụ Ugbo iji nye ndị ọrụ ugbo ohere ịme azụmahịa n'ịntanetị dịka nkwụnye ego, iwepụ, ịzụrụ oge ikuku, ịkwụ ụgwọ ụgwọ site na usoro obere akpa.
Uzo a bu ihe izizi Banyere Ulo Ozo nke Nigeria (USSD) na ebe ndi Banyere Banyere Banyere Akwụ na .kwụ.
Offọdụ n'ime ndị ọrụ ugbo ahụ, ụlọ ọrụ ahụ agbazinyela ego ka ha ghara ịkwụghachi mbinye ego mgbe ụfọdụ, agbanyeghị, dịka e kwuru na mbụ, edepụtara ikpo okwu a na mgbanwe ngwaahịa Afex na mgbanwe ngwaahịa Lagos (LCFE) iji zụọ ahịa na ala ahia.
Ngwọta ohuru ya, Farmer Pay na Agro Money ga - ebido mbido onwa Mee.
O tinyekwala ikpo okwu POS na mmekorita ya na ulo oru dika Paga, Flutterwave na Global Accelerex.
Farmer1st nwere 23,800 n'elu ikpo okwu ya, na-enye ego mgbazinye ego 377 na 1,100 Farm ka ndị na-ere ahịa mechara.
SURJEN na-enye ahia ahia maka Dnyefe Ahụike na Nigeria
Ọtụtụ ndị mmekọ Autochek iji kwado Nnyocha ụgbọ ala na-enweghị nsogbu